mardi, 11 août 2020 21:02
Malaimbandy- Mahabo: Navelan’ireo dahalo ny basy, naleon’izy ireo nitsoaka
Saron’ny Zandary nandritra ny savahao nataon’izy ireo tao Morafeno Fokontany Ambonara Kaominina Malaimbandy Distrika Mahabo ny 5 aogositra teo ny kitapo iray, basy poleta nisy bala tokana, basimborona roa sy fitaovana samihafa fikojakojana basy ary omby iray. Toerana fiafenan’ny dahalo io Morafeno io. Nisy dahalo dimy tao tamin’io fotoana io, saingy vaky nandositra raha nahatazana ireo zandary tonga hisambotra azy ireo, ka tavela ireo fitaovam-piadiana ireo. (Jereo Sary Tohiny)
mardi, 11 août 2020 20:58
Isoanala- Betroka: Olona roa avy namonjy fetim-pianakaviana maty nisy nitifitra
Teny an-dalana hamonjy fodiana ireto olona roa ireto, rehefa avy namonjy fetim-pianakaviana tao Sakoamasy, Kaominina Isoanala no nisy nitifitra tao anaty haizina ka maty tsy tra-drano. Ny alahady 9 aogositra tokony ho tamin’ny 7ora sy sasany hariva no niseho ny loza tao Antsonjomalinika, 6km miala ny renivohitry ny Kaominina Isoanala. Mbola karohina ireo nahavanon-doza.
mardi, 11 août 2020 20:40
Tsy fanjarian-tsakafo nateraky ny Covid-19 : Nanolotra 5 tapitrisa dolara i Etazonia
Nanolotra vola 5 tapitrisa dolara (19 miliara ariary) ny governemanta Amerikana, tamin’ny alalan’ny masoivoho Amerikana ho amin’ny fampandrosoana iraisam-pirenena, hanohanana ny fandaharan’asa fandefasana vola, izay hanampy ireo fianakaviana marefo eto Antananarivo Renivohitra hahafahan’izy ireo hanana sakafo ampy. Ny Fandaharan’asan’ny Firenena Mikambana momba ny Sakafo na ny PAM no mitantana sy mizara io fanampiana amerikana io, izay hamaly ny filana ara-tsakafon’ny olona miisa 323 000 eto amin’ny tananan’Antananarivo, Fianarantsoa, Toamasina, Moramanga, Taolagnaro ary Manakara. Ny fianakaviana tsirairay dia hahazo vola 100 000Ariary isam-bolana mandritra ny roa volana. “Maniry ny hanohana ara-tsakafo ireo fianakaviana marefo sy sahirana sy hanome tosika ireo orinasa eo an-toerana izahay”, hoy ny Masoivoho amerikana, Michael P. Pelletier.
lundi, 10 août 2020 20:38
Fitaterana olona an-tsokosoko: Naiditra « violon » ny Mpamily, ny fiara « fourrière »
Fiara Sprinter miisa roa sy minibus Toyota iray no tra-tehaky ny zandary nitatitra olona an-tsokosoko androany maraina teny amin’ny lalan’i Talatamaty sy Ivato, Distrika Ambohidratrimo. Samy nametaka takelaka « Transport de personnel » amin’ny anarana orinasa tsy miankina iray eny Ivato eny ireo fiara ireo, teo amin’ny fitaratra anoloana, ho « laisser-passer » hahafahany mandeha. Hosoka anefa, rehefa nohamarinin’ny zandary, ilay taratasy nampiasain’ireo fiara ireo hitaterana olona. Samy nitondra mpandeha 32 avy ireo Sprinter, raha toa ka 15 no nentin’ilay minibus Toyota. Notazomina 48ora atao famotorana eny amin’ny kaompanian’ny zandary Ambohidratrimo ireo mpamily telo lahy, nalefa any ambalampamonjana fiara kosa ny fiara nentin’izy ireo avy. (Jereo Sary Tohiny)
lundi, 10 août 2020 13:01
Fandaminana « Vatsy tsinjo » : Tokantrano miisa 12 177 no anaovana fanadihadiana ao amin’ny Boriboritany fahatelo
Miandraikitra ny Boriboritany fahatelo eto Antananarivo Renivohitra ny avy eto anivon’ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka amin’ny fametrahana ny lamina vaovao hitsinjarana ny « Vatsy tsinjo », fanampiana avy amin’ny fanjakana ho an’ireo marefo ara-pivelomana hiatrehan’izy ireo ny fihibohana anatin’ny fahamehana ara-pahasalamana. Tokantrano miisa 12 177 no anaovana fanadihadiana ao anatin’ny 03 andro, ary mpanao fanadihadiana miisa 57 avy amin’ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka miampy mpanentana ara-pahasalamana 57 isa no misahana izany. (Jereo Sary Tohiny)
lundi, 10 août 2020 11:03
Antsirabe: Nahazo tohana ny mpanakanto sy ny mpanao gazety
Fonosana ahitana: Vary, CVO, siramamy, menaka, voamaina, ary aron-tava no nomena ireo mpanakanto sy ny mpanao gazety, iatrehana ny fihibohana anatin’ny hamehana ara-pahasalamana noho ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara. Tonga teto an-toerana nanatitra fitaovana hiadiana amin’ny fihanaky ny covid-19, ny faran'ny herin'andro, ny Minisitry ny Atitany sy Fitsinjaram-pahefana, Razafimahefa Tianarivelo, sy ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, Andriatongarivo Lalatiana ka nandritra izany no nanomezana tohana ho an’ireto mpanakanto sy ireo mpanao gazety eto Antsirabe ireto. (Jereo Sary Tohiny)
vendredi, 07 août 2020 20:57
Cnapmad: Sahirana ny mpiasa, tsy naloan'ny fanjakana ny 950 tapitrisa Ariary nanaovana fanadinana
Misedra olana ny mpiasa sy orinasa Cnapmad (Centre National de Production de Matériel Didactique) manana ny foibeny etsy Ankorondrano. Karama febroary no farany noraisin’izy ireo. Heno koa izao fa tsy naloan'ny fanjakana ny 950 tapitrisa Ariary nanaovana tonta printy ireo fanadinana tamin’ny taon-dasa 2019. Nisy mpiasa namoy aina noho ny tsy fisiana satria efa tsy afaka nisitraka fitsaboana tamin’ny Ostie noho ny latsakemboka tsy naloan’ny orinasa.
vendredi, 07 août 2020 15:36
Nikasi-tanana vehivavy bevohoka: Noesorina tsy ho lehiben'ny « Poste fixe » Ankaramibe ilay zandary
Zandary iray lehiben'ny « Poste fixe » Ankaramibe-Sofia no namelaka tehamaina vehivavy bevohoka ny andron'ny 05 aogositra 2020. Niparitaka tamin’ny tambazotra serasera ny sary sy fanairana mikasika izany. Voamarina fa nisy tokoa ny tranga hoy ny teo anivon’ny Zandarimariam-pirenena. « Tamin'ny 03 aogositra 2020 maraina tao Ankaramibe, Distrikan'Analalava, dia nifanena tamin'ny ramatoa iray tsy nanao aro-vava ny Zandary Chef de Poste fixe ao an-toerana. Ka rehefa noteneniny io Ramatoa io mikasika izany dia nanevateva azy. Tsy nahatanty izany ilay zandary ka nitefaka ».
vendredi, 07 août 2020 15:26
Ampary-Soavinandriana: Mpivady tra-tehaka teo ampamonosana rongony
Teo amponosana rongony miisa 200 fonosana ireto mpivady ireto no tra-tehaky ny Zandary. Mpivarotra rongony ao Ampary, Kaominina ambanivohitra iray lalovan’ny lalam-pirenena faha-43, ao amin’ny Distrika Soavinandriana, Faritra Itasy izy ireo, ka maro ny tanora no vatsian'izy ireo an'ity zava-mahadomelina ity, izay isan’ny mampirongatra ny hala-botry sy asan-dahalo amin’iny faritra iny. Natolotra ny Fitsarana ka notanana vonjy maika ao amin'ny fonjan'i Miarinarivo izy mivady ireo. (Jereo Sary Tohiny)
jeudi, 06 août 2020 15:12
Fipoahana tany Liban: Nisy teratany Malagasy naratra
Hatreto dia vehivavy teratany Malagasy roa no nampahafantatra tamin’ny alalan’ny tambazotra facebook fa naratra nipitihan-javatra nandritra ny fipohana goavana in-droa nisesy tao Beyrouth-Liban ny Talata 4 aogositra teo. Tsy mbola nanao fampitam-baovao ofisialy mikasika ireo teratany Malagasy any Liban taorian’iny loza iny ny eo anivon’ny ministeran’ny raharaham-bahiny malagasy. Ny heno dia misy olona maro tadiavina any, ary mitohy ny famotorana ataon'ny Consul any an-toerana. Namoizana ain’olona miisa 135, naharatrana 5 000 eo iny loza tao Beyrouth iny, raha ny tarehimarika vonjimaika. (Jereo Sary Tohiny)